Farmaajo Oo Imtixaan Siyaasadeed Uu Horyaal, isbahaysiga Imaaraatka Ama Qadar ayuu Kala Dooran Doonaa [Warbixin].
Sunday November 19, 2017 - 19:56:59 in Wararka by Super Admin
Wafdi uu hoggaaminayo Max'med Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Dubai ee wadanka isku tagga imaaraatka Carabta.
Socdaalka Farmaajo oo salka ku haayo wanaajinta cilaaqaadka ka dhaxeeya Imaaraatka iyo DF-ka ayaa larumeysanyahay in uu imtixaan hor leh ku noqon doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Kooxda Villa Somalia oo wajahaysa culeys gudaha iyo dibadda ah.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Farmaajo uu kulamo laqaadan doono Boqorka Imaaraatka Carabta iyo wasiirka arrimaha dibadda Bin Zayed, ilo wareedyo ayaa sheegaya in DF-ka ay wax ka bedeli doonto siyaasadeeda ku aaddan khilaafka u dhaxeeya dowladaha Khaliijka islamarkaana ay la safan doonto isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka Hoggaaminayaan.
Caqabadaha ugu daran ayuu Farmaajo kala kulmayaa saraakiishiisa Villa Somalia ku sugan kuwaas oo siyaasad ahaan ladhacsan siyaasadda dowladda Qadar sida agaasimaha madaxtooyada Fahad Yaasiin oo larumeysanyahay in uu geed fadhi u yahay siyaasadda Dooxa ee Soomaaliya.
Dhinaca kale qaar kamid ah hoggaamiyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ku wajahan magaalada Abu Dhabi halkaas oo kulamo ay kula leeyihiin mas'uuliyiin katirsan Imaaraatka Carabta, dadka indha indheeya siyaasadda DF-ka ayaa sheegaya in imtixaan uu horyaal Farmaajo iyo Kheyre islamarkaana aysan socan doonin go'aankii ahaa in ay dhax dhaxaad ka noqdaan khilaafka ka dhax aloosan dowladaha gacanka Carabta.